Xildhibaanno Saxiixay Mooshin Ka Dhan Ah Xukuumadda Xasan Cali Kheyre.
Saturday September 09, 2017 - 08:19:05 in Wararka by Super Admin
Khilaafka u dhaxeeya madaxda dowladda Federaalka ayaa sii xoogeystay xilli dabeyllo kacdoon ah uu wajahayo maamulka Farmaajo kadib khaladaad siyaasadeed oo maalmihii lasoo dhaafay ay dhax maquuranayeen madaxda ugu sarraysa DF-ka.
Inta badan xildhibaanada Baarlamaanka ayaa la sheegay in ay diidanyihiin hab dhaqanka cusub cusub siyaasadda Soomaaliya oo ay lasoo baxeen Kheyre iyo Farmaajo oo ah in muwaadiniinta Soomaalida loo gacan geliyo dowladda Itoobiya.
Kontomeeyo xildhibaan oo katirsan baarlamaanka ayaa saxiixay mooshin ka dhan ah xukuumadda Kheyre waxayna mooshinka gacanta ugeliyeen Jawaari oo ku magacaaban guddoomiyaha baarlamaanka DFS.
Xildhibaanada ayaa ku eedeeyay xukuumadda Hadda Jirta Khiyaano qaran iyo in ay ku xadgudubtay madax banaanida dalka Soomaaliya!, dhiibistii Cabdi Kariim Qalbi dhagax oo katirsanaa Ururka ONLF ayaa gariir siyaasadeed ka dhax abuurtay DF-ka.
Xukuumada Kheyre iyo Farmaajo madaxda ka yihiin ayaa noqotay dowladdii ugu horraysay oo Argagaxiso ku shabadeysay Ururka ONLF islamarkaana mid kamida mas’uuliyiinta Ururkaas ka iibsatay dowladda Itoobiya.
Lama oga halka uu ku dambeyn doono mooshinka laga gudbiyay Kheyre oo lafilayo in maanta ay ka doodaan xildhibaanada Baarlamaanka DF-ka ay maanta kulan ku yeeshaan magaalada Muqdisho.